EMule sava 2021 - Ndepụta nke sava a pụrụ ịdabere na maka eMule | Akụkọ akụrụngwa
Foto nke eMule akụkọ ifo
You nweghi ndepụta emelitere nke emule sava? You nwere nsogbu emule? A na-ekpocha ndepụta sava site n'oge ruo n'oge?Imaghi ka esi ewelite sava maka emule gi? Echegbula onwe m, achọtala m usoro ntụpọ nke na-akọwa otu esi eme ya.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ eMule, ị kwenyesiri ike na ị maara na akụkụ buru ibu nke sava eMule anaghịzi arụ ọrụ ma ọ bụ na-enweghị ntụkwasị obi. N'ebe a, anyị ga-egosi gị otu esi ahazi eMule gị na Ezigbo Emule Servers maka 2017.
1 Ntuziaka iji hazie sava eMule 2017
2 Olee otú melite sava-enweghị ibidogharịa eMule?
3 Tinye aka sava eMule na aka
4 Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na emule anaghị ejikọta?
5 Ndepụta nke sava Emule August 2017
6 Ndụmọdụ maka eMule
7 Etu esi ejikọ eMule?
8 Jiri nyocha IP emelitere
9 Etu esi ebudata iyi na eMule
10 Video iji wụnye na hazi eMule
11 Budata eMule n'efu
11.1 Emule maka Windows 10
11.2 Emule maka Mac
12 You maara aMule?
13 Ebee ka esi enweta ihe nkiri maka eMule
Ntuziaka iji hazie sava eMule 2017
Ihe mbụ anyị ga-eme bụ imeghe eMule ma gaa na Mmasị> Ngalaba ihe nkesa. N'oge a windo dị n'elu ga-emeghe. N'ime ya anyi kwesiri itinye akara na mpaghara ndia:
Nchekwa onwe melite ndepụta ihe nkesa na mbido
Njikwa NJ Smart
Jiri usoro ihe dị mkpa
Kenye nnukwu ihe dị mkpa iji tinye aka na sava
Ugbu a, na-enweghị ịpị bọtịnụ nnabata ma anyị pịa ebe ọ na-ekwu dezie. Ihe ntinye ederede nke ga - enyere anyị aka itinye sava ọhụrụ ga - apụta na windo ọhụrụ. N'ime usoro a, ihe anyị ga - eme bụ ihichapụ ihe na - egosi (ọ bụrụ na ọ bụghị oghere) ma denye aha http://sites.google.com/site/ircemulespanish/descargas-2/server.met
Chekwaa mgbanwe ederede i mechie ya. Emechaa pịa bọtịnụ Mee na OK ma mechie windo mmasị eMule.
Na nke a anyị nwere ihe niile njikere.
Olee otú melite sava-enweghị ibidogharịa eMule?
Ọ bụrụ na anyị achọghị ka imechi ma mepee eMule iji melite sava anyị nwere ike ime ihe ndị a.
Na isi ihuenyo nke eMule enwere igbe na-ekwu Mmelite Server.met si URL. Detuo na mado http://sites.google.com/site/ircemulespanish/descargas-2/server.met na igbe ederede wee pịa bọtịnụ mmelite ahụ. Na voila, i nweela ya eMule na sava emelitere.
Tinye aka sava eMule na aka
Ọ bụrụ na ịchọrọ jiri aka gị tinye ụfọdụ sava eMule ihe ị ga-eme bụ pịa taabụ Ihe nkesa ohuru. A ọhụrụ window ga-emeghe ebe ị nwere ike itinye IP, n'ọdụ ụgbọ mmiri na aha nke ihe nkesa eMule.
Ọ dị mkpa na ị nweghị inyefe ihe nkesa eMule ọ bụla enweghị ntụkwasị obi. Lee, anyị gosiri gị a Ndepụta ihe nkesa eMule dika nke Jenụwarị 2017 na nkwa zuru ezu.
Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na emule anaghị ejikọta?
Nke a bụ ajụjụ anyị na-ajụ onwe anyị mgbe niile n'agbanyeghị usoro mmemme na-anwa ịnweta ịntanetị. Ọ bụrụ na eMule anaghị ejikọ, anyị ga-elele:
Ihe mbụ m na - eme ma ọ bụrụ na ngwanrọ anaghị ejikọ ma ọ bụ njikọ ya dị nwayọ karịa ka ọ ga - eme ule ọsọ ọsọ. M tụkwasịrị obi na weebụ net, ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ, ọ na-ezuru iji nweta weebụsaịtị ọ bụla (ọ bụghị nke dị arọ) iji jide n'aka na agbanyeghị njikọ anyị.
Ọ dịkwa mkpa lelee na ọ dịghị sọftụwia na-egbochi eMule. Nke a abụghị nke a na-ahụkarị, mana mmelite sistemụ arụmọrụ nwere ike ime ka iwu firewall gbanwee wee bido igbochi ihe na-anaghị egbochi tupu mmelite ahụ. Ọ bụrụ na eMule anaghị ejikọ, anyị ga-aga na ntọala firewall wee hụ na anyị nyere ya ohere.
Ihe ọzọ nwere ike inyere anyị aka ijikọ bụ gbanwee nkesa. Sava nwere ike ịdaba na oge ụfọdụ ihe ngwọta dị mfe dịka ịpị ihe nkesa ọzọ.
Inyinya ibu a na-adọrọ adọrọ ma na-arụ ọrụ etu na mgbe ọ chọrọ. Ezi echiche iji mee ka njikọ gị dị mfe bụ imeghe ọdụ ụgbọ mmiri ị na-eji na rawụta. Dabere na rawụta anyị, a ga-eme ya n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, ya mere, ọ kachasị mma ịme nyocha ịntanetị iji mee ya na rawụta anyị nwere.
Ndepụta nke sava Emule August 2017
Isntanetị jupụtara na sava eMule mana ebe anyị na-egosi gị naanị ndị na-arụ ọrụ.
TV Underground —-> ed2k: // | ihe nkesa | 176.103.48.36 | 4184 | /
net Server —–> ed2k: // | nkesa | 46.105.126.71 | 4661 | /
Ringkekọrịta-Devils.org Mba 3 -> ed2k: // | ihe nkesa | 85.204.50.116 | 4232 | /
Ọ dị ezigbo mkpa ka ị ghara iji ihe nkesa na-adịghị na ndepụta a ebe ọ bụ na ọ ga-abụ na ọ bụ ihe nkesa na-emerụ emerụ, faịlụ nkwarụ ma ọ bụ mmemme juputara na nje. Ejikwala sava eMule nke anaghị atụkwasi obi ya niile.
Ndụmọdụ maka eMule
Fọdụ ndụmọdụ bara uru gbasara sava eMule:
Jiri naanị sava ndepụta dị mma na anyị nyere gị
Ọ bụrụ na ị chọrọ hazie otu nkesa (nke kacha arụ ọrụ nke ọma maka gị dịka ọmụmaatụ) ị nwere ike ịme ya site na ịpị bọtịnụ aka nri> Ibu ụzọ> Elu. Na onyonyo dị n’elu, ị ga - ahụ etu esi eme ya. N'otu ụzọ ahụ, ị ​​nwere ike ibute ndị na-arụ ọrụ kacha njọ n'isi gị ala.
Mgbe ị na-achọ ihe nkesa, ọ bara uru ịlele ndị nwere Ọnụ ọgụgụ kacha mma nke ndị ọrụ.
Etu esi ejikọ eMule?
Mụta otu esi ejikọ eMule
Ihe nwere ike ime site n'oge ruo n'oge bụ na ị tufuru njikọ na eMule. Iji zere nke a ịbụ nsogbu, naanị ị ga-pịa Mmasị> Njikọ wee lelee igbe ahụ Reconnect mgbe ị na-atụfu njikọ.
Jiri nyocha IP emelitere
Maka ebumnuche nchekwa ọ dị mkpa ka ị jiri nzacha IP emelitere. Iji mee nke a, ị ga-aga na Mmasị> Nche na lelee igbe sava nzacha. Mgbe ahụ na igbe nke Mmelite site na URL Include gụnyere URL ndị a http://sites.google.com/site/ircemulespanish/descargas-2/ipfilter.zip
Mgbe ahụ ị kụrụ bọtịnụ Bulite na n'ikpeazụ na Apply na OK.
Ọ dị ezigbo mkpa na ebula mgbe ọ bụla site na ntuziaka http://gruk.org/list.php.
Na nke a emechaala anyị ozi banyere sava eMule. N'ikpeazụ, anyị ga-egosi gị vidiyo ebe ị ga-amụta otu esi etinye ma hazie eMule site na ncha maka ndị ọrụ ahụ amaghị etu esi eme ya.
Etu esi ebudata iyi na eMule
Dịkwa mma. Ọ bụrụ n ’ịbụ onye ọrụ eMule, ọ ga-abụ na ị chọpụtala na ụdị ya kacha ọhụrụ na-enye ohere nbudata .torrent faịlụ, emela? Mba mba, kpachara anya na nke a. Afọ ole na ole gara aga eMule 0.60 pụtara na ntanetị, nke, na tiori, bụ nsụgharị kachasị ọhụrụ ugbu a. Mana, ọ bụrụ na anyị gaa na eMule na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, anyị ga-ahụ na ụdị nkwụsi ike kachasị ọhụrụ bụ 0.50a. Kedu ihe na-eme?
Ihe na - eme bụ na onye nrụpụta nke atọ chere na eMule anaghị aga n’ihu ọsịsọ, o kpebiri imepụta ụdị nke ya ma ọ bụ ya nwere ike ibudata iyi. N'ezie, a naghịzi akpọpụta ụdị sọftụwia a emelitere karịa eMule, ọ bụrụ na ọ bụghị eMuleTorrent.
Na nke a kọwara, onye ọ bụla kwesịrị ịza ajụjụ ma ọ bụrụ na ha kpebie ịwụnye ngwanrọ a mana, ọ bụrụ na ị naghị echegbu onwe gị banyere iji a ụdị nke eMule na mgbasa ozi na nke ahụ nwere ike ịgụnye koodu ọjọọ, n'okpuru m ga-akọwa otu esi ebudata faịlụ .torrent na eMuleTorrent:
Ka anyị gaa na oru ngo na budata ụdị maka sistemụ arụmọrụ anyị (Windows ma ọ bụ macOS).
N'ụzọ ezi uche dị na ya, nzọụkwụ ọzọ ga-abụ ịwụnye faịlụ ebudatara na nzọụkwụ gara aga. Ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe ga-eme, echetara m ọzọ na anyị ga-etinye ụdị mbipute na-akwadoghị.
Nzọụkwụ ọzọ dabere na otu anyị siri ahazi oghere .magnet njikọ ma ọ bụ faịlụ .torrent. N'iburu nke a n'uche, ihe m ga - eme bụ ijikọ njikọ njikọ .magnet na faịlụ .torrent na eMuleTorrent nke mere na n'ọdịnihu ọ ga - adị mfe. Iji mee nke a, ihe mbụ anyị ga - eme bụ ịchọ ịntanetị maka njikọ ma ọ bụ faịlụ ndị a. Enwere ọtụtụ engines ọchụchọ maka .torrents, obere na obere, yabụ ihe anyị ga-eme na nke a bụ ihe abụọ: chọọ maka .magnet, pịa ya ma jikọta ya na eMuleTorrent na otu ihe na faịlụ .torrent, mana na nke a anyị ga-ebudata faịlụ ahụ na kọmputa anyị, pịa ya abụọ wee jikọta ya na eMuleTorrent. Ọ bụrụ na anyị nwere faịlụ .torrent ndị ejikọtara na mmemme ọzọ, anyị ga-agbanwe nke mmemme ga-emepe ha site na ịpị aka nri ya na ịgbanwe mmasị.
Ọzọ anyị ga-eme ọchụchọ maka iyi na ịntanetị. Ọ bụrụ na ihe anyị hụrụ bụ faịlụ .torrent, anyị nwere ike ịdọrọ ya na eMuleTorrent dị ka ị pụrụ ịhụ na onyonyo ahụ. Ọ bụrụ na ihe anyị hụrụ bụ njikọ .magnet ma anyị enweelarịrị ha na eMuleTorrent, ozugbo anyị pịrị ya, ọ ga-emepe na eMuleTorrent. Mdị nke eMule a nwere igwe nchọ ya nke anyị nwere ike iji, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ọdịmma gị.
Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ ihe anyị nwere ike imetụ aka, n'onwe m, echere m na usoro ikpeazụ bụ ichere maka nbudata iji rụchaa nke ga-adị ngwa ngwa karịa nke nke eDonkey network.
Video iji wụnye na hazi eMule
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ịwụnye na / ma ọ bụ ịhazi eMule, lee a nzọụkwụ site nzọụkwụ video nke ahụ ga-akụziri gị otu esi eji njikwa a na-ewu ewu.
Budata eMule n'efu
Ihe P2P Downloader eMule bụ n'efu, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọrụ gị nwere ya (ọ bụghị isi mmalite). Enwere ike ibudata ya na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ọrụ a, dị na njikọ a.
Na nke a kọwara, bea kpachara anya maka nsụgharị na-enweghị akwụkwọ na-arịọ gị ego. Enwere ụfọdụ ndị achọpụtara ọnwa ole na ole na-esighi na gọọmentị, dị ka eMuleTorrent, nke anyị nwere ike inye onyinye ma ọ bụrụ na anyị masịrị ọhụụ ọhụrụ ọ na-eweta, mana nsụgharị gọọmentị nke eMule bụ n'efu.
Emule maka Windows 10
Chefuo: enweghị ụdị eMule maka Windows 10. Ọ bụrụ n ’iji mmasị pụrụ iche na-agụ ebe a, ọ bụ maka na eMule bidoro inye gị nsogbu mgbe ị na-emelite ụdị sistemụ kachasị ọhụrụ maka kọmputa Microsoft, mana nke a bụ ihe ziri ezi ma ọ bụrụ na anyị echebara na Windows 10 dị nchebe karịa nke gara aga. nsụgharị Windows.
Ihe anyị ga - eme iji rụọ ọrụ nke ọma bụ ịnweta nhọrọ firewall sistemụ yana hapụ njikọ niile na eMule. N'agbanyeghị nke ahụ, usoro ahụ nwere ike ịchọpụta ngwanrọ ahụ dị ka ọnụ ụzọ azụ.
Emule maka Mac
E nweghịkwa nsụgharị nsụgharị nke eMule maka Mac. Ihe enwere nsụgharị na-akwadoghị, dịka eMuleTorrent ma ọ bụ nhọrọ mmeghe emeghe aMule.
Ihe anyị nwere ike ime iji wụnye eMule na Mac bụ iji sọftụwia emulation dịka Wine, ihe, n'eziokwu, bụ nke m jiri mee nseta ihuenyo nke eMuleTorrent si Ubuntu (PlayOnLinux, ka ọ bụrụ nke ziri ezi).
You maara aMule?
Enwere ndị ọrụ na-anaghị achọ iji sọftụwia nwere ikike ma họrọ iji sọftụwia mepere emepe, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha bụ ndị ọrụ Linux. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe aMule bụ: ụdị eMule mepere emepe emere maka ndị ọrụ macOS na Linux.
Nwere ike ịsị na anaghị emelite ya dịka nsụgharị ọrụ maka Windows, mana anyị agaghị ekwu eziokwu niile. Ọ bụ ezie na ọ dị ogologo oge na otu ụdị, nke a bụ ikpe n'ihi na ọ dịghị mkpa ịgụnye atụmatụ ọhụrụ. Emeputara Septemba aMule 2.3.2 na ọtụtụ ndozi, karịsịa n'ihe nke bug fixes.
Ọ bụrụ na ị na-eji ụdị Linux dabeere na Ubuntu, ịwụnye aMule dị mfe dị ka ịmepe ọnụ na ịpị iwu ahụ sudo apt wụnye amule –y (ịbụ "-y" iji wụnye na-enweghị na-arịọ anyị maka nkwenye mgbe abanye anyị paswọọdụ). Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike ịnweta gị mgbe niile akwukwọ ọrụ, budata koodu ya ma tinye ya na Linux na macOS.
Ebee ka esi enweta ihe nkiri maka eMule
Nke a bụ ajụjụ a jụrụ dịka ọ dị, mana ọ bụ ntakịrị ihe mgbagwoju anya: enweghị fim maka eMule n'ihi na eMule abụghị onye ọkpụkpọ ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ. Ihe ị chọrọ ịma bụ ebe nweta njikọ ibudata fim na eMule.
A na-akpọ njikọ ndị a eD2k njikọ ma ọ bụ eLinks ma inwere ike ịchọta ha na ibe ndị a.
Know maara ihe sava maka Emule? Hapuru anyị okwu ị na - eji budata ọdịnaya throughntanetị site na onye ahịa P2P a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » EMule sava
Ihe nkesa a na-agbanwe mgbe niile, nyochaa akwụkwọ ntuziaka ndị a bara uru mgbe niile.
Daalụ maka Ama !!
Ekele sitere na Patagonia nke Argentina!
Zaghachi Ivana Carina
Kad adịghị arụ ọrụ na usoro ndị ahụ
@Senovilla ị maghị ihe bummer ọ bụ ịchọrọ ịchọ sava ọhụrụ maka emule oge ọ bụla ha hapụrụ.
@Ivana Obi dị m ụtọ na ọ baara gị uru.
@ Jesus, maka KAD amaghi m ihe m ga eme 🙁
Ekele m na-ara na ndị sava na emule m niile 2008 na nsogbu na sava na amaghị m ihe na-eme ekele
Otu emulator sitere na ebe a dijo
ECHEFU IHE NDER NA-EKWEERE. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enweghị sava a pụrụ ịtụkwasị obi fọdụrụ, ndepụta na gruk.org emelitere emelitere kemgbe oge ọkọchị, ihe nkesa edonkey 1 gbanwere IP ma weghachite ya. Mgbe ha na-arụ ọrụ, dị ka ha dị ole na ole, ị ga-enwe obere id maka saturation. Jiri netwọk Kademlia (KAD) naanị na naanị. Ọ bụrụ na anyị niile na-eme ya n'ụzọ a, n'oge na-adịghị anya, anyị ga-enwe ike ịgafe site na ndị sava ahụ na ndị raara onwe ha nye ibunye ha IP ọjọọ na ndị nledo.
Zaghachi An emulero si ebe na site ebe a
Kedu ihe na-adọrọ mmasị, ị maara, anaghị m enye ibudata na kọmputa m, ugbu a ị ga-ahụ nzọụkwụ site na nkwụsị na ibe nke ị gwara m ma ọ dị mma ma ọ bụrụ na m ga-aga nke ọma. Daalụ
Zaghachi Rosa María
Enyemaka!!!!!!!!!!!!!!! Enweghị sava, ọ dị naanị otu ma ọ na-ejupụta mgbe niile.
Etinyekwa sava naanị netwọk KAD
Gwa m onye na-egbu ọchụ ... I can DOWNLOAD A EMULE 2009 ..
EGO KA MMA NA OZI ...
Biko Zaghachi M… M nwere ike ibudata nke a ka ịge ntị na egwu ????? ANGELICA KISS
Daalụ maka ozi ahụ, ha bụ obere ihe maka ndị anyị maara obere, ha na-abata n'ụzọ dị oke mma. Daalụ ọzọ.
Ndewo, enwere m nsogbu na sava, enwere naanị otu ma emelitere ha na gịnị ka m nwere ike ịme?
Rosa Vera Garcia bụ onye a ma ama dijo
Nke a bụ ụlọ ahịa, ana m ekele gị nke ukwuu, ị zọpụtala m na mgbu ọkụ na-aga n'ihu.
Zaghachi Rosa Vera Garcia
Ọ ga-amasị m ịnweta ezigbo sava
Emule ??, mana i ka eji emule ??? xDD.
Ogologo ndụ RAPIDSHARE !!!!
Na-akpali nnọọ mmasị post
iru mmiri dijo
Daalụ!! bara uru !!!
Ọ ga-amasị m mmadụ nyere m aka, ebudatara m emule ahụ yana naanị ya nwere sava atọ ma ha niile juputara. Agarala m mmasị ma enweghị nchekwa ma ọ bụ ihe ọ bụla na-apụta, mmadụ nwere ike ịgwa m otu esi etinyekwu sava.
Ị nwere ike ị nyere m aka? Ha na-egosi m sava 3 Australia, Peerates, eDonkeyServer N.2, m nwekwara, nke m na-eji ọtụtụ Razorbach 4.0, na enwere m ọtụtụ ndị ọzọ, nke m maara na ha enweghị ntụkwasị obi, mgbe m pịa otu n'ime ndị a, akpọrọ n'elu, enweghi uzo. Enwere m ike iji ndị a 4 kedu ihe m ga - eme ndị ọzọ? Enwere m ike ịnweta naanị sava ndị a? Jọ jidere m na agaghị m enwe ike ibudata fim.
Ka anyị lee ka ị si hụ ya.
Obi dị m ezigbo ụtọ mgbe m zụrụ diski mpụga USB 1Tera, maka € 97 tinyere ụtụ isi nke onye isi ọma ya bụ SGAE, nke a na-akpọbu otu ụzọ n'ụzọ iri, na ị ga-akwụ ụgwọ ọbụlagodi na ị gara hel, na-ekwe ha nkwa na obi dị ụtọ na 400GB na. akụkụ faịlụ Temp ndekọ nke ngalaba ọhụrụ a, n'ime naanị izu atọ nke nbudata na-enweghị mgbachi nke faịlụ, nke ndị sitere n'aka ha, dị afọ 300 ma ọ bụ karịa (ya mere na-asọpụrụ nwebisiinka) na, lee, ọ kwụsịrị na mberede na-agba Emule ahụ , njeghari na nne muru m Ma aka m arụbeghị ọfụma, Emule, mgbe 8k fichara na nrụnye.
Ihe ọ bụla na - eme na Emule ka ọ bụ na ebujuru m PC ịkwụsị ọrụ iji chebe ebe nchekwa? na inwe njikọ 100 n'otu oge na-emefu nnukwu ihe.
Ihe nrịba ama ahụ, tupu enwetaghachi m, bụ na mgbe Emule malitere vsmon, firewall, na mmiri ara ehi malitere ịgbawa; Na nchịkọta, gbanyụọ ma gbanye kọmputa ahụ n'ihi na ọ payaghị ntị na onye ọrụ ọrụ.
Ugbua ka m nyeghachiri Emule, ọ dị ka ụbụrụ nwụrụ anwụ: ọ naghị ata ahụhụ ma ọ na-ata ahụhụ; abughi nbudata ma ọ bụ budata faịlụ, ọ na-ewe faịlụ ndị m na-ekerịta (foto ole na ole site na njem m na ọfụma m).
Echere m na anyị niile maara otú okwu ikpe dị ka njedebe a. Agaghị m agafe karịa ịbụ otu n'ime ụdị "amaghị ama"; ma dike ma ọ bụ onye nwụrụ n'ihi okwukwe, ọ bụghị m, ma ọ bụ Emule, ọ bụ uche ndị mmadụ: anyị chọrọ ịkekọrịta ma anyị ga.
Ka anyị nwee anụrị,
Nke a na-aga a nnọọ mma. Enweela m na onye ahịa emule nwere ike ịgbake ọnọdụ ahụ tupu ịmaliteghachị ma ọ bụrụ na anyị debe ndekọ "Temp" ma ọ bụ ihe ọ bụla anyị kpọrọ ya.
N'okwu m, m ga-ekwu na nsogbu bụ na enwere m ọtụtụ faịlụ na "Temp" nke Emule weghachitere ga-enyocha, na-eme "hashing". Enwere ọtụtụ ma ọ ga-akwụnye na kọmpụta ahụ.
Ugbu a akọwaala m “Temp” ọhụrụ na Mmasị> Akwụkwọ ndekọ> faịlụ na-adịru nwa oge, m na-agafere ndekọ aha ọhụrụ a faịlụ niile dị na “ochie” ochie, mana site na nchịkọta: Ana m enye ha aha na windo ihe nchọgharị ma gafere ha site na otu dị iche iche gaa na Temp ọhụrụ ahụ, kpachara anya ịhapụ oge ọ bụla ndị niile na-amalite otu, ebe faịlụ ọ bụla anyị na-ebudata nwere ike ịnwe faịlụ ruru anọ; imaatu, 1001.part, 1001.met, 1001.met.bak, 1001.settings, na 1001. stats. Ọ bụghị mgbe niile ka ha nọ ebe niile, mana enwere mgbe niile, ma ọ dịkarịa ala, onye na-agwụ na .part (ezigbo faịlụ) na nke na-agwụ na .met (ntakịrị data nke ọnọdụ nbudata nke faịlụ ahụ, 1001 na nke a imaatu); Achọpụtakwala m nke na - agwụ na .met.back (ọ kwesịrị ịbụ iko .met bụrụ na ọ gbajie).
Na nchikota, ugbua enwerem Emule ka anyi na anakwe obi uto n 'ibudata onodu nbudata (ihe edeputara na faịlụ ibudata na ebe enwere ebudatara na ntaneti). Nke a na-arụ ọrụ.
N'aka nke ọzọ, ihe ha na-ekwu maka ijikọ naanị na netwọk Kad, na-enweghị sava na-arụ ọrụ nke ọma maka m. Echere m na nsogbu m bụ na m meghere ọtụtụ njikọ (karịa 100) na kọmputa m anaghị akwado ha, yabụ Emule n'onwe ya mebiri faịlụ ndị o mepere n'oge ahụ.
Chị ọchị na ịkụ aka.
Kedu otu m ga-esi nweta ezigbo sava, ikekwe mmadụ nwere ike ịkọwa etu esi eme nke a
Naanị nye ekele maka nnukwu ọrụ ahụ.
Emelitere m sava ahụ n'ụzọ zuru oke, anaghị m eji eMule ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ (ọ bụ ezie na a ka etinye ya). Daalụ ndị enyi.
saved zoputara ndum ndu m ekele m onye otu
Daalụ nke ukwuu maka ozi !!!
ezigbo ozi. Daalụ nke ukwuu!!!!!!!!!!!!!
Nwere ike ịgwa m na m ga-eme ntụpụ ụkwụ iji nweta akara ngosi dị elu?
Ekele dịrị gị nke ukwuu maka ọrụ gị
Ndewo, enwetaghị m nbudata ọ bụla, ị nwere ike ịgwa m ihe kpatara, daalụ
Zaghachi jose andres
Nnukwu ndu, bara ezigbo uru ma daalụ
M hapuru gi my XDD
KAD netwọk anaghị ejikọta maka ụwa. M na-agbalị ime ihe niile, N'ihi = ihe ọ bụla. Eleghị anya mmadụ nwere ezigbo ntụnye, daalụ
Kedu ka m ga esi jikọọ na kademy? Daalụ
Zaghachi na Tavo Peñarol
onye ara dijo
M na-eji Chimera 2.0 dabere na eMule v0.50a ma ọ bụrụ na ọ jikọọ na netwọk KAD
nwa nnem n'amaghi dijo
emule, taa na - arụ ọrụ karịa mgbe ọ bụla ... na - emepe ọdụ ụgbọ mmiri, na netwọk, na-arụ ọrụ na ndị ọrụ gọọmentị ...
Ejikwa ya? Echere m na ọ kpochapụrụ dị ka Ares haha
HAHAHAHA M H SER THAT N'THEYLỌ N'ELLỌ N'RLỌ N'IFLỌ N'IFLỌ
HEH Ọ B IFR I M NA-AH IT ỌR WOR
Esi họrọ mbadamba